China Wokuqhawula Umtshato Lawyer - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
China Wokuqhawula Umtshato Lawyer
Baya kuwa ngothando okanye yiya ngaphandle uthando apha
Esi-China lawyer hetalia izahlulo insights kwi umntwana custody mbaNgeli china Umthetho Ifemi, thina yithi rhoqo yenza oku hetalia kwaye nceda kuza emva ukuba unomdla yethu esemthethweni inkonzo okanye inkcazelo yakho. Ingaba iyonela kububanzi bephepha a enobunzima custody okanye ukuvelelwa mba? Ingaba besilwa neqabane lakho eks malunga umntwana wakho ke custody? Ingaba worried malunga umntwana wakho ke, ukhuseleko, yakho parental amalungelo, kwaye yakho nako ukubona umntwana wakho? Ukukhusela amalungelo akho kwaye abantwana benu ngeyona ndlela ibhetele kunye uncedo oluvela a knowledgeable China wokuqhawula umtshato lamagqwetha ngeli china Umthetho Ifemi. Akukho nto kubalulekile ngakumbi kunokuba umntwana ke ukhuseleko kwaye kulungile-ntle. Ngeli China Umthetho Ifemi, abaxhasi bethu ingaba bethu phezulu otshisa ibunzi. Siphinda-apha ukuze anike ingcebiso kwaye inkxaso ufuna ukufikelela iinjongo zakho. Thina iqabane lakho kunye abaxhasi bethu, ngokubonelela passionate ukumelwa kuba nangona sikwimeko yoqoqosho enzima usapho umthetho iimeko, kuquka abo involve i-komntwana isemthethweni kwaye yesitalato custody.
Kukho ukubonelelwa expats umsebenzi baze baphile kwi-China nowadays.
Yinto ethile ukuze langaphandle kazwelonke unako tshata kwaye wokuqhawula umtshato a Isitshayina wesizwe kwinkundla yomthetho kwi-China. Njengoko i-China usapho lawyer, ndinguye imibuzo wabuza nokuba zimbini langaphandle abavela kumazwe angaphandle unako tshata okanye wokuqhawula umtshato kwi-China. Ngokunxulumene a umjikelezo, Eziliqela Imicimbi Ephathelene Ukumiselwa kwalo Mtshato Ubhaliso Umthetho akukho mlinganiselo Kubulungiseleli ye Domestic Imicimbi, ababini bangaphandle unako tshata kwi-China. Langaphandle wesizwe kufuneka umisele zilandelayo amaxwebhu: bakhe yakhe semthethweni okanye incwadana yokundwendwela ezinye semthethweni ngamazwe ukuhamba amaxwebhu, eya kubonisa ukuba umntu ubuncinane, amashumi amabini ubudala kwaye umfazi o ubudala isiqinisekiso yakhe yakhe marriageability esikhutshwe notary karhulumente i-ofisi okanye negunyabantu elinobuchule yakhe yakhe lizwe eziqinisekisiweyo yi-consulate Abantu ke Republic of China wakhe yakhe kweli lizwe, okanye eziqinisekisiweyo yi-consulate yakhe wakhe ilizwe kwi-China, okanye isiqinisekiso yakhe yakhe marriageability esikhutshwe consulate yakhe wakhe ilizwe kwi-China isiqinisekiso eqinisekisa ukuba umthetho kweli lizwe, apho abemi bamazwe angaphandle bevela kuqoqoqsho umtshato ebhalisiweyo overseas mna wanika phezulu ngomhla we-na khetha ka-discounted okanye sliding imali senzo. Ukuba zibe ngenxa enkulu inxalenye oko ndikwenza ingaba usapho umthetho, kwaye enye zimbalwa iindlela rein abantu ukusuka ekubeni ngokupheleleyo kwaye ngokupheleleyo ngaphandle i-nzulu end unreasonable yindlela ezininzi ngayo iindleko. Waba umxhasi kanye abo ngenene sidinga uncedo. Edlulileyo basekhaya kwi-mtshato (ulwaphulo-mthetho uxwebhu, nto leyo rare kuthelekiswa rhoqo ndibona) kwaye waba ngamaxesha onke harassed nge-i-eks abo drove njengokuba kude kube ngoku njengoko asibhozo miles ukuya imfuneko yena hlala e yakhe entsha ekhaya. Constantly wahlala phantsi threat ka-agreeing ukuba iimfuno malunga abantwana 'okanye enye into.
Ndivuma umtshato okanye wokuqhawula umtshato ingaba lula
Ezinjalo **** kuquka kakhulu umlinganiselo iinkcazelo ukufa dismemberment. Phantsi Isitshayina umthetho, China usapho abaqondisi-mthetho ibandakanye imicimbi enxulumene malunga umtshato, okunokukhethwa kuko, wokuqhawula umtshato, cohabitation kwaye yonke into enxulumene abantwana, njenge ukufikelela amalungiselelo kwaye isondlo. Kanjalo ibandakanya-mali uthetha-thethwano, prenuptial izivumelwano kwaye ilifa iingxaki. Ezinye iimeko ibandakanye substantial yexabiso kunye enobunzima yemali imiba, okanye phezulu-inkangeleko amatyala kunye famous abantu. Okwenzeke kusapho umthetho ziqhutywa ngumoya okwenzeke kulo mbutho, kwaye nangona umsebenzi usapho umthetho lawyer ufuna bukhali isemthethweni engqondweni kanjalo iimfuno yezentlalo izakhono njenge tact kwaye uvelwano. Usapho umthetho basenokuba njengoko kuchaziwe a jetta phakathi komthetho kwaye esesosiyoloji.
Ngenxa elinovakalelo uhlobo umxhasi uqhagamshelane, oqeqeshawayo abaqondisi-mthetho aren khange rhoqo onikiweyo eliphezulu inqanaba uxanduva kwi-uthelekiso kunye nezinye isemthethweni iindawo, nangona oku iinguqu njengoko lawyer uba ngakumbi experienced kwaye yakhe izakhono kwanda.
Nantoni na ufuna ntoni, zange tyelela Ifowuni Incwadi ukukhetha enokwenzeka wokuqhawula umtshato lamagqwetha kwi-China. China abaqondisi-mthetho, kufuneka ekhethiweyo cautiously. Imali dished ngaphandle kuba iindleko kuba ukuba wokuqhawula umtshato lamagqwetha ngu ngokuqinisekileyo i-mali kamva ngomhla we-ezixabisekileyo abantwana. Ngoko ke, kusoloko ukukhangela lwezakhono kunye isikhalazo okulungileyo zaziwa ngokuba enokwenzeka abaqondisi-mthetho ngenyameko. Uzakufumana amaninzi afumaneka ngokuzenzekela ezikhoyo iindawo ukukhangela ilaphu elipeyintiweyo ka-enokwenzeka abaqondisi-mthetho kuba na wokuqhawula umtshato. Kukho umthetho isichazi-magama waziwa njengo"Martindale-Hubbell"ukuba uluhlu abanye personal isiqalo kwaye yesitalato indawo abaqondisi-mthetho.
Oku akuthethi ukuba nangona kunjalo, zithetha kokuba uluhlu izikhalazo.
Nayiphi na lawyer bamelwe kuba ezidweliswe abantu ukususela vavanya imifanekiso. I-vavanya imifanekiso enokuba ngokufanayo ulwazi. Abaqondisi-mthetho uza kuhamba kunye i-lokuqala luhlomle kuwo kunye amaqela kwimeko wokuqhawula umtshato kodwa ayikwazi ngokusemthethweni amele omnye umntu ukuba ingcebiso athethe nayo nayiphi na litigant ngaphakathi yakho isuti. Ngoko ke, yenza oko kwenzeka kuqala kuba ukuba lokuqala luhlomle kuwo ingakumbi ukuba kufutshane usapho lawyer ingaba ngenene a ezaziwayo"i-shark."Qhagamshelana ukuba lawyer ngoko nangoko. Eyona ndlela ikhethekileyo kuba"i-shark"ingaba ngenene a lawyer ngokudlulela amava coping kunye installments ka-wokuqhawula umtshato. Kwi-ngokwenza oku, uza kusoloko kufuneka ngakumbi thorough iinkcazelo ngakumbi iinketho kuthelekiswa a youthful, unskilled lawyer. Yakho lawyer yindlela elungileyo yomphulaphuli kwaye kanjalo uya kuba elinolwazi lawyer kwaye negotiator ke proven nge amava.
Abo, kubonakale enzima ulwazi evidenced ngokusebenzisa eminyaka.
Oku umntu uza nkqu exhibit uvelwano kunokuba devalue kuwe nge-isithethi superior nangayiphina. Basebenzisa i-relationally kunye yakho lawyer kwaye kuba umthengi ukuba ugcina kwentlawulo yakho imeko. Ngaxeshanye, yakho lawyer, kufuneka ukuba omnye kubonakalisa persistence ukuba awuyazi kakhulu malunga umthetho wokuqhawula umtshato. Ngamanye amaxesha, umtshutshisi zingangahambelani appreciated ngenxa ezimbalwa tactics kusetyenziswa mayela umthengi. Ingcebiso uza ngochulumanco zichaza ukuba kutheni eziliqela zinto kufuneka kuphela kuba kwenzeka ukuba oku izibonelelo - khaya kwi-sebenzisa ixesha elide. I kakhulu eyona lawyer yi highly experienced wokuqhawula umtshato lamagqwetha kwi umthetho wokuqhawula umtshato, kodwa ngaphezu koko baye uqiqe irhafu umthetho, ipropati amaxabiso kwaye real estate umthetho. Yakho lawyer kufuneka ube nako ukugqiba ukuxhasa abantwana benu kolwabiwo-mali, kuba knowledgeable malunga umhlala-phantsi komthetho, kwaye ingaba umhlobo kwi-forensic iyabala. China Lawyer Hetalia uza kwentlawulo nawe phantsi ingingqi yakho iimeko ngendlela elandelayo iintlobo: Iiyure imali amalungiselelo Contingency imali amalungiselelo Cambalala imali amalungiselelo Ipesenti imali amalungiselelo ndingumntu iphepha-mvume China lawyer. Uninzi abaxhasi ingaba bamazwe angaphandle kwaye iinkampani. China Lawyer Hetalia kuba associates kwi-Beirut, i-shanghai, Tianjin, Guangzhou, Suzhou, Nanjing, Qingdao, Fuzhou, Hainan, Hefei, Wuhan, Xian, Changsha, Xiamen kwaye Hangzhou. Funda Ngakumbi Esi-China Lawyer Hetalia ngu aiming ekuhlaleni ngokubonelela ngcono ulwazi ukuqonda Isitshayina umthetho kuba foreigners. Kufuneka unayo nayiphi na isemthethweni mba kwi-China, ufowunele uqhagamshelane ne-China Lawyer Hetalia kuba luhlomle kuwo. Esa kundoqo luhlomle kuwo ifumaneka simahla Ezinye isemthethweni inkonzo, nangona kunjalo, ndiya kuba ibe igcwalisiwe kwi-ngenxa umyinge kwaye ngenxa kunjalo. Upetros Zhu, i-experienced China lamagqwetha iphepha-mvume ukuba senzo umthetho kuba ngaphezu iminyaka elishumi, umbhali eli-China Lawyer hetalia, yamkela nayiphi na enquiry okanye luhlomle kuwo enxulumene Isitshayina umthetho.
Progressive Iqela (Sasetshayina)
Таможня хоҡуғы, юридик фирмаһы ҡала өсөн һәр ҡытай